N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị na-azụta ndị na-ehicha ụlọ ka anyị ckụọ ihe mkpofu, mana n'eziokwu, ọtụtụ ihe enweghị ike ịmịcha, ma ọ nwere ike ị maghị nke ọma. Ya mere, taa, anyị ga-atụle ihe ndị na-enweghị agụụ nwere ike ịmịkọrọ. Cheta ilekwu anya na emela ihe ọ bụla na-emebi vacuu ...
Dị ka isi ihe eji ehicha ụlọ - onye na-ehicha ụlọ, ọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ ọ bụla bụ ngwaọrụ dị mkpa. Agụụ Cleaner dị mfe iji, ma ọtụtụ ndị anaghị amasị nhicha na mmezi nke agụụ Cleaner. Ka anyị mụta otu esi ehicha ma debe va ...
Anyị factory kemgbe afọ 10, na anyị na-mgbe niile na-agbalị kasị mma na-enye ngwaahịa na bụ zuru okè n'ihi na anyị ahịa, anyị na-elele ọ bụla mpempe tupu eziga, anyị na-atụ ọ bụla mpempe n'aka ndị ahịa anyị dị mma na-eru. Ma anyị maara na naanị nwere ochie ngwaahịa na-ezughị, iji gi ...